I-Star Wars: I-Jedi Yokugcina, Umbono Wethu kanye Nombono "Wokunethezeka" | Izindaba zamagajethi
Okuhlangenwe nakho kwethu nge I-Star Wars: I-Jedi Yokugcina, Yize kulo mcimbi besifuna ukunikeza ifilimu yalesi sici umuzwa ohlukile, siyijabulele kumabhayisikobho e-Luxury ama-Yelmo cinema.
Kuze kube manje le kungaba yi-Star Wars enhle kakhulu yesikhathi se-Disney, yize ishiye ukunambitheka okumuncu emilonyeni yabathandi abaningi be-saga. Sizophawula ukuthi siyithole kanjani i-Star Wars: I-Jedi Yokugcina, izimpi ezihlangana phakathi ezingeni elingaphazanyiswa. Lowo okuze kube manje usendleleni yokuba yi-movie engenisa imali ephezulu kunazo zonke emlandweni.
Siqala ngokusobala, lokho esikutholile ukuthi yi-movie okufanele ibonwe ngabathandi be-saga, kepha njenganoma iyiphi i-movie enhle ye-Disney ayishiyi noma ngubani oyibona ingenandaba. Ukuboniswa kochungechunge lobuciko ezingeni le-CGI akunakuqhathaniswa, akekho noyedwa ofana nenkampani kaMnu Walt ongasekho ekhipha amandla lapho izinkampani eziningi ngokwengeziwe zintengantenga khona. Cishe akunakwenzeka ukuthola amaphutha wokukhiqiza noma wokukhiqiza ngemuva, yize bebone kufanelekile ukugcina izilawuli eziningi ze-analog zikhona ezinhlelweni zokuhamba zemikhumbi ye-intergalactic, Okuyinto entsha esikhathini esidlule sekuyinto edonsela emuva cishe ebukekayo.
Futhi lokho kuzofinyelela esiphethweni ngokushesha impikiswano, lesi sahluko VIII singcono ngokungenakugwenywa kunesahluko VII, Eqinisweni, singasho ukuthi mhlawumbe ihlanganisa konke okwenziwe ebingakatholakali kuleso esedlule, yize imizuzu yokuqala engamashumi amabili yokuqala yefilimu asikacaci kahle ukuthi izoba yini noma kungani izindlela eziningi ezingasho lutho, Iqiniso ukuthi ukuqoqwa okwanele kodwa okuthakazelisayo kwezimpi ze-intergalactic kusigcina sinamathele esihlalweni ngokwesaba okukodwa.. Ngabe i-movie izophela ngemuva kwenguquko elandelayo? Kepha bekungenzeki.
Ngaphandle kokungabaza, zezinhlelo zakamuva ze-Star Wars, yona esikhumbuza kakhulu nge-Star Wars yokuqala, isimilo okunzima ukwehluka phakathi kwesibili nesikhulu sikaKylo Ren, mhlawumbe owayengumlingiswa onomlingiswa omncane ku-saga, kuze kube yilesi siqephu sesishiyagalombili, lapho ukufana no-Anakin kusobala kakhulu, ukuphindukuzalwa kabusha kwangempela, noma mhlawumbe okubi.
1 Ukuhlukunyezwa kwesihloko nezikhathi "I-Disney brand"
2 Isipiliyoni se- «Luxury» ngeYelmo Cines
Ukuhlukunyezwa kwesihloko nezikhathi "I-Disney brand"
Asikwazi ukubalekela isitayela seDisney, noma ngezikhathi zomdonsiswano obonakalayo nokuqhuma yonke indawo lapho kuvela khona umlingiswa nge ibinzana elihlekisayo kodwa elingahambisani kakhulu ne-Star Wars, okungenani ngemuva kokungabikho kukaHan Solo. Kodwa-ke, lesi yisici esikhona kakhulu kumafilimu eDisney eminyakeni yamuva.
Kokubili la ma-dazzles nama-clichés, ama-classics azama ukuwathinta inhliziyo encane yabathandi bokuqala be-saga, sengathi bafuna ukubanelisa njalo ngemizuzu eyishumi ngokunqekuzisa ikhanda ngezinto ezidlule, ezingadingekile noma eziduduzayo, kuwumuzwa ongajwayelekile.
Isipiliyoni se- «Luxury» ngeYelmo Cines
I-Yelmo Cines yenze izinguquko ezithokozisayo emabhayisikobho ayo ePlaza Norte 2 (Madrid), futhi asikwazanga ukumelana nesilingo sokuya emakamelweni okunethezeka esikhazimula ngawo. Akungabazeki ukuthi uYelmo ufuna ukwenza amaseshini athile abe yisipiliyoni, ngoba yize kungakufanele ukusebenzisa insiza njalo kumthandi wama-movie (cishe u- € 16), ngeke neze ukujabulele ukunethezeka okunjalo.
Ukuqala nge Izihlalo ezihlukile nezintofontofo, ezakhiwe nge-backrest kagesi nangesistimu yemilenze ezokuvumela ukuthi uthokozele ifilimu njengasekhaya lakho. Ukuqhubeka, insizakalo yetafula izokuvumela ukuthi ushayele uweta futhi ufinyelele kwimenyu yayo emnandi ukuze udle i-pizza, ama-burger amancane kanye ne-popcorn yakudala ezokhonzwa ngaphandle kokususa amehlo akho ku-movie.
I-Yelmo Cines ikwazile ukudala indawo yokuNethezeka ngempela yabathandi bama-movieEsingakaze sibhekane nakho phambilini, kepha ngokungangabazeki okuphawulwa ezincwadini zethu zokubhalela amaseshini afanele ukuwajabulela, njenge-Star Wars: I-Jedi Yokugcina.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Ama-movie nochungechunge » I-Star Wars: I-Jedi Yokugcina, umbono wethu kanye nombono "Wokunethezeka"
I-Chrome 64 izokuvumela ukuthulisa amavidiyo adlala ngokuzenzakalela